परम्परा तोड्दै देउवा, भारत छोडेर किन जाँदै छन् बेलायत ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहिलो विदेश भ्रमण बेलायत हुने भएको छ । उनी बेलायतको निम्तोमा भने जान लागेका होइनन् । बरु बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुन जान लागेका हुन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने गरेकोमा देउवाले यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि बेलायतलाई गन्तव्य बनाएका छन् ।
विगतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०६५ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनलाई विदेश भ्रमणको पहिलो गन्तव्य बनाएका थिए । यो घटनाले निकै चर्चा कमाएको थियो ।
विगतमा प्रचण्डले ओलम्पिक समापनमा भन्दै चीनको भ्रमण गरेजस्तै देउवाले पनि वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुन भन्दै बेलायतको भ्रमण गर्ने भएका छन् । जे होस् उनले पनि परम्परालाई तोड्दै प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य बेलायतलाई बनाए ।